SomaliTalk.com » Nuur
Home » Qoraallada Halkudhegga "Nuur"
Waxa qoray: Nuur Cilmi Xalane Email: warsan54@gmail.com Mudane, Waxan maleynayaa in dadka iyo dalkuba yihiin muhimaddaada kowaad, ma qaranimadiisaa, ma nabadgelyadiisaa, ma dadkiisaa, ma xadadkiisaa, ma, ma —–. Laba sano ka hor, markii xilka laguu dhaariyey, dad badan oo aan ka mid ahay, ayaa qabay inaad xalka bilow fiican u noqon doonto, hoggaamin fiicanna horseed ka noqon doonto. Waxan...
W/Qoray: Nuur Cilmi Xalane Email: warsan54@gmail.com Labadii xukuumadood ee ay soo kala dhiseen Maxamed Cabdullaahi farmaajo iyo ra’iisal wasaaraha hadda jooga Cabdiweli Gaas waxad mooddaa in lagu gooni yeelay qurbo joogta. Matalan xukuumadda Mudane Gaas, 99% waa qurba joog oo dhamaantood heysta dhalasho shisheeye. Arrinkan oo aan laga been sheegin, cid kasta oo daraasad gaaban ka sameysaana...
ILEYN DUUL WADA SABOOLAAN AHEYN!!!!!
Haddii aad u fahmto inaan magaca qormadan ula jeedo in Somaaliyi aad idilkeed sabool tahay, may’e, waxa la yiri; halka laga hodmaa waa qalbiga, ee maaha waxa aad heysato oo xoolo ah. (It is the heart that makes a man rich. He is rich according to what he is, not according to what he has. Henry Ward Beecher). Mar haddaad la mid noqoto ka aan heysan wax uu bixiyo, waxad tahay sabool, astaahila in la...